"ပေးဆပ်ခြင်းမှာ ပျော်မွေ့သူများ ပရဟိတအဖွဲ့" - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
အဖွဲ့များအားလုံးကိုယ့်အဖွဲ့များ "ပေးဆပ်ခြင်းမှာ ပျော်မွေ့သူများ ပရဟိတအဖွဲ့"
စတင်တည်ထောင်သူ Ashin Nyana Dipa
(၁) အမှန်တကယ် လိုအပ်နေသော ဘုန်းတော်ကြီးသင်နှင့် သီလရှင်သင် ဘ/က ကျောင်းများကို လှူဒါန်းထောက်ပံ့ခြင်း၊
(၂) တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ အောင်မြင်ပြီး ဆရာဝန်၊ အင်ဂျင်နီယာ….. အစရှိသည့် အဆင့်မြင့် ပညာရပ်များ ထပ်မံဆည်းပူးရန်အတွက် ပညာသင်ယူစရိတ် အခက်အခဲရှိသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ပညာသင်ဆု ချီးမြင့်ထောက်ပံ့ခြင်း၊
(၃) မည်သည့်ဘာသာရပ်မဆို တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တစ်ခုခု ရရှိပြီး မဟာတန်းကို ဆက်လက် ပညာသင်ယူရန် ပညာသင်ယူစရိတ် အခက်အခဲရှိသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ပညာသင်ဆု ချီးမြင့်ထောက်ပံ့ခြင်း၊
(၄) သဘာဝဘေးအန္တရာယ် တစ်ခုခုကြောင့် အတိဒုက္ခရောက်နေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် ပညာရေး အထောက်အပံ့များ ကူညီထောက်ပံ့ခြင်း၊
နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်မှု= Oct 3, 2012 Like 23 members like this
ပရဟိတ အလုပ် ဆိုတာပေးဆပ်ခြင်းပါ။ပေးဆပ်ခြင်းမှာ ပျော်မွေ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစွန့်လွှတ်၊ အနစ်နာခံ သူတွေပါ။စွန့်လွှတ်၊ အနစ်နာ ခံသူတွေဟာသူတော်ကောင်း တွေပါ။သူတော်ကောင်း ဆိုတာကုသိုလ်မှာ ပျော်မွေ့သူတွေပါ။ကုသိုလ် ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကို ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ တွန်းအားပါ။ဒါကြောင့် …နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လောက ကောင်းကျိုးအတွက်ပရဟိတ လုပ်ကြစို့….. **************************ပေးဆပ်ခြင်းမှာ ပျော်မွေ့သူတို့၏ လမ်းကြောင်းသည် နိဗ္ဗာန်လမ်း၊ရယူခြင်းမှာသာ ပျော်မွေ့သူတို့၏ လမ်းကြောင်းသည် အပါယ်လမ်း။====================ဆုတောင်းပေးနေသော နှုတ်ခမ်းများထက် ကူညီနေသော လက်များသည် ပို၍ တန်ဖိုးရှိ၏။သင်သည် ဆုတောင်းပေးနေသူလား ကူညီပေးနေသူလား သိအောင် ကြိုးစားပါ။====================နှမ်းတစ်စေ့ဖြင့် ဆီမဖြစ်နိုင် ဆိုသည့် စကားထက် ဆီဖြစ်အောင် နှမ်းတစ်စေ့မှ စတင်ခဲ့သည်ဟု အတွေးအခေါ် ပြောင်းပြီး မိမိသည် နှမ်းတစ်စေ့ ဖြစ်ရသည်ကိုပင် ဂုဏ်ယူလိုက်စမ်းပါ။====================ရယူခြင်းမှာသာ ပျော်မွေ့သူတို့သည် မိမိတို့ ရှာဖွေထားသော ငွေကြေး ဥစ္စာများကို မိမိကိုယ်ကျိုး အတွက်သာ အသုံးချကြသည်။ပေးဆပ်ခြင်းမှာ ပျော်မွေ့သူတို့သည် သဒ္ဓါနှင့် ပညာ မျှတစွာ ကျင့်သုံးနေထိုင်ရင်း မိမိအကျိုးအပြင် သာသနာတော်၏ အကျိုးကိုလည်း ထမ်းဆောင်ကြလေကုန်သည်။*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*တို့သာသနာ တို့မလုပ်ကတို့ပြင်မည်သူ ရှိမည်နည်း...တို့မလုပ်လျှင်ခြားဘာသာဝင် ကြီးစိုးလျှင်ဗုဒ္ဓမြန်ပြည် ပျောက်မည်တည့်....အရှင်ဉာဏဒီပဦးဆောင်နာယက ဆရာတော်Ph.D (Thesis), M.Phil, M.A in Buddhist Studies(Delhi University, India)B.Ed (M.D University, India), B.A (Geography),Diploma in Dhammapada & Eng (စစ်ကိုင်းသီတဂူ)Diploma in Hindi (Delhi University, India)www.ashinnyanadipa.comwww.facebook.com/Ashin.Nyana.Dipa nyanadipa@gmail.com Mobile – 09 43146111 (Myanmar)Mobile – 0091 – 9958519113 (India)<:>+<:>+<:>+<:>+<:>+<:>+<:>+<:>+<:>+<:> Discussion Forum
ဘုန်းတော်ကြီးသင်နှင့် သီလရှင်သင် ဘ/က ကျောင်းများ အပါအ၀င် ပညာသင်ဆု လှူဒါန်း ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းချက်များ...
Started by Ashin Nyana Dipa. Last reply by နီစံ (အနီ) Jan 10, 2012.4Replies
“ပေးဆပ်ခြင်းမှာ ပျော်မွေ့သူများ ပရဟိတအဖွဲ့” အဖွဲ့ဝင်များမှ သော်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့ဝင် မဟုတ်သူ များမှ သော်လည်းကောင်း မည်သူမဆိုသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မိမိတို့၏ နေရာ ဒေသ အသီးသီးရှိ ဘုန်းတော်ကြီးသင်နှင့် သီလရှင်သင် ဘ/က ကျောင်းများ စာရင်းကို အောက်ပါ…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........ဘလော့အမျိုးအစား(ပရဟိတ) ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ တာဝန်ခံများမှ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးကြရမည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာ ကိစ္စရပ်များ...
Started by Ashin Nyana Dipa. Last reply by ပဏ္ဍိဘာန ( ဗလ ) Nov 12, 2011. 1 Reply
(၁) ပြည်ပနိုင်ငံများ၊ ပြည်တွင်းမြို့များမှ တာဝန်ခံများသည် လက်ခံရရှိပြီးသော အလှူငွေများကို လစဉ်တိုင်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ အဖွဲ့ထံသို့ ပေးပို့ရန်၊(၂) အလှူဘဏ္ဍာငွေ ထိန်းသိမ်းရေး၊ စာရင်းစိစစ်ရေး၊ အလှူငွေ ထောက်ပံ့ရေး၊ ပြန်ကြားရေး စသည့် ကိစ္စရပ်များအတွက်…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........ဘလော့အမျိုးအစား(ပရဟိတ) ပေးဆပ်ခြင်းမှာ ပျော်မွေ့သူများပရဟိတအဖွဲ့၏ အလှူငွေ လက်ခံရန် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ တာဝန်ခံများ စာရင်း...
Started by aung lin thu Sep 26, 2012.0Replies
လစဉ် အလှူရှင်များသည် အောက်တွင် ဖော်ပြပေးထားသော ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ တာဝန်ခံများကို ဆက်သွယ်၍ လစဉ် အလှူငွေများကို လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။မြန်မာ(၁) ဆရာတော် အရှင်ဉာဏဒီပ (အဖွဲ့၏ ဦးဆောင်နာယက ဆရာတော်)- Tel : > 0091-9958519113 (mobile) (India),0091-11-27662320…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........ဘလော့အမျိုးအစား(ပရဟိတ) !*^*! အဖွဲ့၏ တစ်နှစ်ပြည့် သြ၀ါဒကထာ !*^*!
Started by Ashin Nyana Dipa Sep 26, 2012.0Replies
သြ၀ါဒကထာ ဟု စားသားအရ ခေါင်စဉ်အဖြစ် ရေးသားထားရသော်လည်း အမှန်တော့ မိမိ၏ ဉာဏ်စွမ်းရှိသလောက် အသိအမြင်များကိုသာ မျှဝေခံစားစေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ မိမိ ပြောကြားလိုသော စကားများသည် များစွာ ရှိသော်လည်း အများသူငှာ အတွက် အကျိုးများလိမ့်မည်ဟု စဉ်းစား ယူဆမိကာ မကျဉ်း…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........ဘလော့အမျိုးအစား(ပရဟိတ) အလှူဘဏ္ဍာငွေ ထ်ိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့...
Started by Ashin Nyana Dipa Jan 5, 2012.0Replies
အလှူဘဏ္ဍာငွေ ထ်ိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့မတည်အလှူရှင်များနှင့် လစဉ် အလှူရှင်များမှ လှူဒါန်းထားသော အလှူငွေများကို ကမ္ဘောဇဘဏ် ဘဏ် Saving အကောင့် တွင် အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ် (၄) ဦးဖြင့် တာဝန်ယူထားပါသည်။ Name of Bank > Kanbawza Bank Ltd. BotahtaungAccount…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........ဘလော့အမျိုးအစား(ပရဟိတ) ပရဟိတ ပုဂ္ဂိုလ်များတွင် ထားရှိကြရမည့် စိတ်ထား၊ သဘောထားများ…
Started by Ashin Nyana Dipa Nov 7, 2011.0Replies
ပရဟိတ လုပ်ကိုင်နေသူများသည် သူတစ်ပါး အကျိုးပြု လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ပေးနေသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ပရဟိတ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများ ဆိုရာတွင် ရဟန်းရှင် လူ ပုဂ္ဂိုလ် အားလုံးကို အကျုံးဝင်စေသည်။ထိုကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ပေးနိုင်ဖို့ရန်…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........ဘလော့အမျိုးအစား(ပရဟိတ) အားလုံးကြည့်ရန်...
"ပေးဆပ်ခြင်းမှာ ပျော်မွေ့သူများ ပရဟိတအဖွဲ့" သို့အဖွဲ့ဝင်ပြီးမှ မှတ်ချက်များကိုရေးသားနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
"ပေးဆပ်ခြင်းမှာ ပျော်မွေ့သူများ ပရဟိတအဖွဲ့"
ပရဟိတ ပုဂ္ဂိုလ်များတွင် ထားရှိကြရမည့် စိတ်ထား၊ သဘောထားများ…
ယခု ဖွဲ့စည်းနေသည့် ပရဟိတ အဖွဲ့၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ အခြေခံ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လုပ်ဆောင်ကြမည့် လုပ်ငန်း ဆောင်တာများ…
Thet Thet Oo
Sa Sa Khine
Htain Lin Oo
လောကဓံမုန်တိုင်းများ နှင့် ကြံ့ခိုင်သည့်စိတ်ထား
Top News · Everything လှိုင်ကျော်ထွေး posted blog postsဒုက္ခသစ္စာကို ပိုင်းခြား သိမှတ်ရာ၌ နည်းသုံးဖြာဆိုတာ ဘာလဲဒိဋ္ဌိနဲ့ ၀ိစိကိစ္ဆာ ဘယ်သူကပိုမိုဆိုးသလဲဗုဒ္ဓသာသနာတော်၌ အပြောရ အသိရ အခက်ဆုံးတရားဆိုတာ ဘာလဲ15 minutes agokaungsu and Thet Thet Oo are now friends48 minutes agodimplemit leftacomment for lin htike"ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့်…"51 minutes agodimplemit leftacomment for Thet Thet Oo"ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့်…"52 minutes agoDaw Khin Aye liked မူကြိုဆရာ's blog post 'ရွှေတိဂုံစေတီတော်၏ အံ့ဖွယ် ၉ ပါး'2 hours agoSa Sa Khine shared ကိုညီညီတင်'s blog post on Facebook"ဓမ္မ ဘဏ္ဍာဂါရိက အား ရှိခိုးခြင်း"2 hours agohla moe 24 commented on Thaung Tan's blog post 'ရဟန်းကို ဘာကြောင့် ရိုသေလေးစားရှိခိုးထိုက်သလဲ'"ဗဟုသုတတွေရသွားပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်"3 hours agoThet Thet Oo liked ကောင်းမြတ်မင်း's group ဗုဒ္ဓဘာသာအမေးအဖြေကဏ္ဍ3 hours agoSa Sa Khine liked thein wai's blog post 'ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် လည်ပုံပြတ်ပုံ တရားကို အလွယ်တကူ နားလည် သဘောပေါက်ကြစေရန်။'4 hours agoကလေးတို.ဆရာမ commented on အရှင်ဝဏ္ဏ's blog post 'ဒီနေ့လည်း လွန်ဆွဲဦးမယ်'"မှန်ပါတယ် “လွန်ဆွဲဦးမယ်“ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးက အဓိကကျနေပါတယ်--…"4 hours agoThet Thet Oo and lin htike joined ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺4 hours agoSa Sa Khine liked ကိုညီညီတင်'s blog post '"လူ လူချင်း ရှိခိုးခြင်း"'7 hours ago More... RSS